အဘယ်ကြောင့်အာဖရိကန်နှင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်များကို“ ဘယ်သောအခါမျှဘယ်သောအခါမျှမပျက်ပြားစေရ” ကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်အမြဲတမ်းထိခိုက်ပျက်စီးစေသနည်း။ - AFRIKHEPRI
Jငါသည်ဤဆောင်းပါးအား Kongolese sapology ၏ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Vieux Boukoul ထံအပ်နှံသည်။ သူကအနုပညာနှင့်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားများ၏လမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အမြဲသပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ အမြဲသပ်သပ်ရပ်ရပ်၊ အဟောင်းလူသွားပြီနည်းနည်းစောလွန်းနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်နှလုံးသည်ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သို့သော်“ သေလွန်သူများသည်မသေကြပါ” ဟူသောအစဉ်အလာကကျွန်ုပ်တို့အားပြောထားသည်။ ဒါ့အပြင်ငါသူ့ကိုကောင်းတစ်ပြန်လာချင်ပါတယ်။ သူ၏လက်ရာမြောက်သောအလုပ်ကမျိုးဆက်သစ် Kongolese အဆိုတော်များအားလှုံ့ဆော်ပါစေ။ Kendé na kimia Papa
အာဖရိကအစဉ်အလာနှင့် ပတ်သက်. , အာဖရိက၏စကားပြောသောဝိညာဉ်၏စကားပြောဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်အရာခပ်သိမ်း, လုံးဝအရာအားလုံး, Nzambi ဆက်စပ်ကြောင့်အာဖရိကကြော့ရှင်း၏စကားပြောသောခြော Nzambi (ဘုရားသခ) နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ကျွန်တော်တို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ငါသည်သင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်တို့သည်ကြော့နှင့်စတိုင်ဖို့အများကြီးအရေးပါမှုအဖြစ်ရဘာလို့နားလည်ရန်ကြိုးစားရန်အချိန်နှင့်အာဖရိကအစဉ်အလာတစ်ခုခရီးစဉ်ယူဖိတ်ခေါ်, ဘာကွောငျ့လဲကျနော်တို့သူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်, ဒီလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆက်နေကြသည်။
ဒါဟာအာဖရိကန်နှင့် African-Americans တွေ, များစွာသောတစ်သင်းလုံးကကစားသမားများကဲ့သို့, သူတို့စတိုင်လ်နဲ့ကြော့ရှင်းဖို့အရေးကြီးပုံကို attach ကြောင်းလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာသူတို့ရုပ်ဝါဒဖြစ်ကြောင်းထင်, ဒါမှမဟုတ်အသွင်အပြင်အတွက်သိပ်စိတ်ဝင်စားမှုဝတ်ဆင်စေခြင်းငှါ,; ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။
ငါတို့သည်အာဖရိကန်နှင့်ဤမျှလောက်နှင့်တူ African-Americans တွေအတွက်ကြော့ရှင်းဖို့အရေးကြီးပုံကိုအများကြီးဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်ပေးရဘာဖြစ်လို့နားလည်ရန် undermining လိုလျှင်အဖြစ်မှန်မှာတော့, သင်အာဖရိကဝိညာဉ်ရေးရာအစဉ်အလာကိုကြည့်ဖို့ရှိသည် ။ သို့သော်ဝိညာဉ်ရေးရာထည့်သွင်းစဉ်းစားဆွေးနွေးခြင်းမပြုမီ, နှင့်အချိန်ပြန်ခရီးသွားလာ။
"(ဥရောပရေကြောင်း) ဂီနီ၏ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းနှင့် Vaida မှာဆိုက်ရောက်, ဂျာမန် ethnologist လီယို Frobenius ပြန်ပြောပြသောအခါ, ဗိုလ်မင်းနှစ်ခုအတန်းအားဖြင့်အတော်ကြာအဖွဲ့ချုပ်တဲ့အရှည်နှင့်အတူကောင်းစွာ-ခန့်အပ်ထားသောလမ်းများရှာတွေ့မှအံ့သြခဲ့ကြ သစ်ပင်များ: သူတို့အားဖြင့်စည်ပင်, လှပသောလယ်ကျေးလက်ဖုံးလွှမ်းနေ့ရက်ကာလအဘို့ကူး သူတို့ကအထည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ယက်ခဲ့သောရောင်စုံဝတ်စုံဝတ်ဆင်ယောက်ျား ! ကွန်ဂို၏နိုငျငံတျောတစ် dressy swarm လူအစုအဝေးအတွက်နောက်ထပ်တောင်ဘက်, ပိုးနှင့်ကတ္တီပါ, အကြီးစားများနှင့်ကောင်းမွန်စွာအမိန့်ထုတ်တိုင်းအသေးစိတ်, အစွမ်းထက်မင်းအရာရှိ, ခမ်းနားထည်ဝါစက်မှုလုပ်ငန်း၌ဖော်ပြသည်။ အရိုးခြင်ဆီမှယဉ်ကျေး! ထိုအဆိုအလားတူ "ဥပမာအဘို့, မိုဇမ်ဘစ်၏အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှတိုင်းပြည်၏အခြေအနေဖြစ်ခဲ့သည်။ (အာဖရိကန်ယဉ်ကျေးမှု Cf. သမိုင်း)
သည် "ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ဝတ်စုံ," Kongolese ပိုးများနှင့်ကတ္တီပါကိုဝတ်ဆင် ... အ14èmeရာစုကိုဝတ်ဆင်အာဖရိကန်။ ဤတွင် Sapologie များ၏ဇာစ်မြစ်ရှိသနည်း
Solange နှင့် Sapologues
Stroma နှင့် Sapologues
ဒါဟာသူတို့ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်း, ဟောင်းအာဖရိကန်ထုံးစံအတွက်အကြောင်း, Sapologues ရိုးရှင်းစွာပွားခဲ့ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်မယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါဒါထင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Bokoko (အနုပညာနှင့်အာဖရိကကွီးအကဲမြား၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့) ဎကသှ '' လူကိုတီထွင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အသစ်အဘယ်အရာကိုမျှမရှိသူအောက်မေ့။ ရိုးရာအာဖရိကခုန်အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေကိုသူတို့မသိစိတ်ပြီးသားရိုးရာအာဖရိကခုန်များတွင်တည်ရှိနေသည့်လှုပ်ရှားမှုများ, ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ပြန်လည်, မျိုးပွား, တီထွင်မအာဖရိက-အမေရိကန်ကခုန်ပြအကြားတူညီ။ သငျသညျအနညျးငယျသုတေသနကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ဥပမာ, သငျတို့ညီမျှတှေ့လိမျ့မညျ twerkတစ်ဦးက "ကခုန်?" ရိုးရာအာဖရိကခုန်များတွင်မြန်နှုန်းနဲ့ဗေဒနဲ့သူ့ရဲ့တင်ပါးကိုရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဘယ်။
"အာဖရိကကသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြင်ပကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လေ့လာသင်ယူကြဘူး; သူတို့အစားသူတို့ပြီးသားအပိုင်သိကျွမ်းခြင်းပညာကိုသတိရ Learning"Malidoma အချို့ကသူ့စာအုပ်ထဲတွင်တစ်ဦးအာဖရိကဝိညာဉ်ရေးရာဆရာကိုကြှနျမတို့ အာဖရိကသည်ပညာကို.
ကိုဒတျချြလူသား Olfet Dapper (1636-1689) နဲ့အတိတ်ကာလသို့ခရီးသှားဆက်လက်ကြပါစို့။
သူ့စာအုပ်အတွက် အာဖရိက၏ဖော်ပြချက်, အဆုံးစွန်သော wrote:
"ဟုအဆိုပါ Volta အနီး aborea ခုနှစ်, Negroes အကြားလူအပေါငျးတို့ ... တစ်ဝါဂွမ်းအထည်စားဆင်ယင်ဖြစ်ကြပြီးအမျိုးသမီးစားဆင်ယင်နီးပါး Monomotapa ခုနှစ်တွင်ယောက်ျား ( ... ) ၏တူကို လုပ်. , ရှငျဘုရငျတို့မပြောင်းကြဘူးဝတ်ဆင် mode ကို, သူတို့ကတိုင်းပြည်တစ်ပိုးအထည်ထည်နှင့်အတူကြာမြင့်စွာစားဆင်ယင်ဝတ်ဆင်; တစ်ဦးသောတံစဉ်ဂီနီလဲလှယ်၏နိုငျငံတျော၏လူတို့သည်ပန်းချီကားများကိုသူတို့ ( ... ) ကိုရွှေအိန္ဒိယနှင့်အတူပန်းထိုး, ဆင်စွယ် ( ... ) ဝါဂွမ်းပတ္တူနဲ့ကြီးမားတဲ့အတွက်ဝတ်ဆင်ဘုံကလူတပ်ဆင်အတူသူတို့သယ်ဆောင် အဆိုပါ Negroes Wanqui ရှိ ( ... ) (မိမိတို့၏ဝါဂွမ်းနှင့်အတူ) များမှာ ဘယ်လောက်ခိုင်မာတဲ့ကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေရွှေနှင့်သိကျွမ်း သောသူတို့သည် Acanistes "နဲ့ကုန်သွယ်မှု။
ဒါဟာနှစ်ခုပုံရိပ်တွေ Olfet Dapper များ၏ဖော်ပြချက်ဥပမာပေးရမယ့်:
ရဲ့အတိတ်ကာလအနည်းငယ်ထပ်မံကျောသွားကြကုန်အံ့။ ရာစုနှစ်များစွာသို့မဟုတ် 8oo နှစ် 8 နောက်ပြန်။
ဤတွင်ကျနော်တို့နဝမရာစုဝန်းကျင်ပြင်သစ်တွင်ဆင်းသက်ခဲ့သူပထမဦးဆုံးအာဖရိကန်အဖြစ်ခန့်အပ်ဟောင်းတဦးမူးရလောက်, Fabre d'လှငျ (1767-1825), ပြင်သစ်သမိုင်းပညာရှင်သင်ယူယျ။ သူကရေးသားခဲ့သည်:
"White ကလူတို့သညျမိမိတို့အကိုမီးရှို့သစ်တောများ, သူတို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ၏လူတို့သညျအလငျးအသုံးပြုပုံပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒါပေမဲ့ဒီခြားနားချက်တစ်ဦးတည်းကသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဤသူတို့သညျလွှားထွန်းလင်း, ထူးခြားသောအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်း... "( Cf. လူသားတို့၏သမိုင်း)
တစ်ဦး Moore ၏ပုံတူ
နဝမရာစုတှငျအထူးအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်သောသူသည်အာဖရိကန်။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်အစဉ်အမြဲ "အစဉ်အဆက်အဖြစ်ထိခိုက်ပျက်ပြားစေ။ " ခဲ့ကြကြောင်းတွေ့မြင် ဒါ့အပြင်စတိုင်ဟာအာဖရိကန်ကြားတွင်ဟောင်းအစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ်ရှိခြင်း, အကြော့ရှင်းရှိသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ရိုးရှင်းစွာသူတို့လှပသောအရာတို့ကိုလှပသောအဝတ်တန်ဖိုးထားကြောင်းဖော်ပြနိုင်ဘူး။ ထက် Mais..c'est အများကြီးနက်ရှိုင်း။
2 ။ အာဖရိကကြော့ရှင်း၏ဝိညာဉျရှုထောင်
ထိုသို့ Nzambi ပြောဖြစ်ပါတယ်, အမွငျ့မွတျနှင့်အတူတစ်ဦးအစီရင်ခံစာ, အ Bokoko (အနုပညာနှင့်အာဖရိကကွီးအကဲမြား၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့) အတွက်ကိုလိုနီခေတ်မတိုင်မီအားလုံးလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများဝိညာဏရှုထောင်ပါဝင်သည်ကြောင်းမှတ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ် (ဘုရားသခငျသညျ) ။ အဆိုပါ Bokoko အရာအားလုံး NZAMBI နှင့်အတူစတင်သည်အပေါင်းတို့နှင့်ကိုယ်တော်နှင့်အတူပြီးဆုံးကြောင်းသင်ပေးတယ်။ ဒါဟာအစလူကို Nzambi, ချုပ်အဆိုတော်များ၏ပုံရိပ်ကိုအတွက်ဖန်တီးခဲ့သှ, ဒါကြောင့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကအလားအလာအနုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်အထက်ဖြစ်ပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကားအဘယ်သို့သောအရာကိုအကြားနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်၏, လူ့ဖြစ်လျက်ရှိမဟုတ်ရင်ရှည်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဤနေရာတွင်မျိုးပွားဖို့မစ်ရှင်, ဘုရားသခငျ့အလှအပ embody တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ Nzambi (ဘုရားသခ) ကဲ့သို့လည်းလက်ရာဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းများအတွက်လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ စကြဝဠာတစ်ခုအကြွင်းမဲ့အာဏာလက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, အာဖရိကန်အမြဲသူတို့လုပ်ပေးအရာအားလုံးအတွက်အလှအပ, ဗေဒ, symmetry နှင့်သဟဇာတရှာကြ၏။
ကျနော်တို့အများကြီးဒေသများ၌ဤတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ...
ဆူဒန်ဗိသုကာ - ဓာတ်ပုံ - Alesk
Nubian ဗိသုကာ - ဓာတ်ပုံ - lavoutenubienne.org
ဗိသုကာ Kassena - ဓာတ်ပုံ - Rita Willaert
ဓာတ်ပုံ - http://renaudossavi.mondoblog.org
ကြော့ Hamar - ဓာတ်ပုံ - Kairoimage
ကြော့ဖူလာနီ - ဓာတ်ပုံ - Tuul & ဘရူနို
ကြော့ရုဘာ - ဓာတ်ပုံ - https://sarahamla.wordpress.com
ကြော့ Kongolaise - ဓာတ်ပုံ - LisaClarke
အမြဲကြော့နှင့်သန့်ရှင်းစေခြင်းငှါဤသည်လိုအပ်ကြောင်း, ထို Bokoko (အနုပညာနှင့်အာဖရိကကွီးအကဲမြား၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့) တွင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဗိမာနျတျောစဉ်းစားသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထင်ဟပ်။ တစ်ဦးကဗိမာနျတျောရှိရာ Nzambi (ဘုရားသခ) ။ နေထိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Lingala တှငျ, ခန္ဓာကိုယ် nzoto ကဆိုသည်။
MUKULU ပိုင်ခွင့်အဆင်းလှသောစာအုပ်, အာဖရိကဘိုးဘေး, Ya Elima ၏ဟောပြောချက်ထဲမှာ, ကျောက်ဆူးကခုန် Longo ၏ကုထုံးနှင့်စတငျကျွန်တော်တို့ကိုဒီပြောထားသည်:
"Nzoto (Inzo) "အိမ်တော်" ကိုဆိုလိုသည်; "ကျွန်တော်တို့ကိုကြှနျုပျတို့သညျ" သတ်မှတ်ရန်။ ထို့ကြောင့် nzoto (ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်) "ကျနော်တို့ရဲ့အိမ်" အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် "ငါတို့" ခန္ဓာကိုယ်မဟုတျဘဲ "ငါ့" ကိုယျခန်ဓာ? အဘယ်ကြောင့်အများကိန်းမဟုတ်ဘဲအနည်းကိန်း? ခန္ဓာကိုယ်အတွက် Ka (တစ်ဦးချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကို), ဒါပေမယ့်လည်း MOZALI (ဘုရားဖြစ်သူကားအဘယ်သူတစ်ဦး) သာအတူတကွကြောင်းကိုငါသိ၏။ ခန္ဓာကိုယ်၌, MOZALI သူ MOZALI တငျပွသောတစ်ဦးချင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်တွေ့ကြုံ။ Nzoto (ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်) သည်စွမ်းအင်ဆုံရတဲ့ဗိမာနျတျောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသေးသေးလေးထဲမှာဠာကိုယ်စားပြုတယ်"
Nzambi (ဘုရားသခ) ကြှနျုပျတို့၏ကိုယျခန်ဓာကြောင့်လည်း, အဲဒါကိုတသမတ်တည်းသန့်ရှင်းလှပကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးဘီဘင်အဘို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ခရစ်ယာန်, မွတ်စလင်များအဘို့အလိုလျှင်, တကဘုရားကျောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗလီကြောင့်ဤအရပ်တွင်ဘုရားသခင်နှင့်အတူသစ္စာရှိသဟာယကောင်းစွာပရိဘောဂများနှင့်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထား, သန့်ရှင်းသောသူကအရေးကြီးတယ်, ဟောင်းတဦးအာဖရိကအဘို့, ကကောင်းစွာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ် Nzambi (ဘုရားသခ) ၏ နေ. ဖြစ်၏ဂရုစိုက်သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်သန့်ရှင်းသောသူအရေးကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့တော်တော်လေးအဝတ်နှင့်ထူးခြားသောဝတ်ထား၏အလေ့အထရှိခဲ့ဒါကြောင့်ပါပဲ။
ဒီအစဉ်အလာကိုလိုနီခေတ်နှင့် Maafa (ထိုကျွန်ကုန်သွယ်မှု) အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးယနေ့ချိန်အထိကူးစက်နေပါတယ်။ ဒါကအာဖရိကန်အာဖရိကန်အမေရိကန်တွေမြင့်မားစတိုင်နေရာအဘယ်ကြောင့်, ပင်ဖြစ်သည်အမြဲစမတ်နှင့်ကောင်းစွာဝတ်ဆင်ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါဟာ Nzambi (ဘုရားသခ) အားဂုဏ်ပြုတစ်လမ်းဖြစ်၏။
အပြင်ကကြောင်းအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်မဖြစ် ခိုးရာပါပစ္စည်း African-Americans တွေတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါပိုက်ကွန်အပေါ်ကိုဖတ်ရှုနိုင်သည့်အရာကိုမှ, ဒါကြောင့် "အဓိပ်ပာယျလိုဟူသောအသုံးအနှုနျး" swagger "မှကြွလာယုံကြည်မှုနှင့်အတူကမ္ဘာကြီးကိုတင်ပြဖို့ဘယ်လိုနဲ့ စတိုင်နှင့်အတူ။ "
နီးပါးအာဖရိကန်အမေရိကန်တွေအနုပညာတွင် "ဖန်တီး" လူအပေါင်းတို့သည်အာဖရိကအစဉ်အလာတစ်ခုပွဲရှိပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းပါရမီနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု Bakoko (ဘိုးဘေးတို့) သို့ထိပုတ်ပါ။ , စတိုင်အိမ်ရှိခြင်းသန့်ရှင်းသောအရာတစ်ခုခုသည်။
Bokoko ခုနှစ်တွင် (အာဖရိကန်ကွီးအကဲမြား၏အနုပညာနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့), ချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်စတိုင်ဖြစ်မတန်တဆစျေးနှုန်းများမှာဝတ်ဆင်ဇိမ်ခံအဝတ်အစားဆိုလိုခြင်းနှင့်တဦးတည်း "အစဉ်အဆက်အဖြစ်ထိပါးကြောင်းလူတိုင်း၏မကျြမှောကျ၌ဝါကြွားခြင်းမဟုတ်ပါ "။ အဝတ်အစား၏စျေးနှုန်းကျနော်တို့နေသောသတ်မှတ်မထားဘူး, သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးအားခှငျ့မပါဘူးလို့ပဲ။ အဆိုပါ Bokoko ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာသတ္တဝါဖြစ်ကြောင်းသင်ပေးတယ်။ အရှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင် နှင့်ဤမသက်ဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဝတ်အစား၏။ အရေးကြီးသည်ကဘာလဲငါထင်, ငါတို့အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ထားတဲ့နှင့်အတူသန့်ရှင်းမှု, ကြော့နှင့်ဗေဒဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာငါတကယ် proletarian ချဉ်းကပ်အစ်ကို Nafoor Qaa တန်ဖိုးထားကြောင်းအသိဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောလစဉ်အဝတ်အစားအရောင်းတစ်ခုတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာစတိုင်အရည်အသွေးကောင်းပျစ်သီး, စုစည်း။ ငါစတုရန်းအဆိုပါ Bokoko ထဲမှာရှာပါ။ ကလစ်နှိပ်ပါ ici ou ici သူမအဘယ်အရာကိုမြင်ရန်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စတိုင်, "အစဉ်အဆက်အဖြစ်ထိခိုက်ပျက်ပြားစေလိမ့်" အာဖရိကန်နှင့်၎င်းတို့၏နည်းနည်းညီအစ်ကိုတို့, African-Americans တွေအကြားအလွန်အရေးကြီးသောလျှင်မသန့်ရှင်းဖြစ်ပါတယ်ပါပြီ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုမျှဝေဘယ်သူကိုနှင့်အတူ Nzambi များအတွက်ရုပ်ဝါဒပေမယ့်ရိုသေလေးစားမှု (ဘုရားသခ) ကမဟုတ်ပါဘူး ...